Glory Archives — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko uzuko
Ukuze kum ukufumana into eyenziwa, Kufuneka ngengqiqo yokuba ndiza ukwenza into ezukileyo. "Ukuba ke mna lo trash phandle, uya indoda trash ukusindiswa?"Mna umfanekiso guy enkulu, kwaye mna abafane ngakumbi iinkcukacha okanye imisebenzi sakubambezela. ngelishwa, iinkcukacha kunye imisebenzi sakubambezela nibaninzi kobomi benene. Oku mhlawumbi Ndasokola…
Intetho ezinekratshi, Uzuko kuThixo
Ndiyakuthanda kids. Esinye sezizathu Ndiyamthanda kids Kungenxa yokuba abonisa ukuba thina. Baya ufana izipili kancinane. Makhe ndinazise into endiya kuthetha. Abantwana kufuneka phantse zonke iingxaki Kananjalo, kufuneka, kodwa ezo iingxaki kakhulu nje kokukhona kuba asazi ukuba ukufihla njani noko. Oku kucaca ngokwenene xa abantwana benze izinto akuhambi Limelwe ukuba liyenze.
Ngaba wakha wayibona into kid ukuchukumisa akuhambi ayifanelanga ukuba angamchukumisi? Baya ndijonge Ukuba ukhangela. Abazikhathaleli ukuba omnye kid ujonge; bona nje abafuni abantu abadala okanye abazali ukubona. Yini na ukuba benze, nangona? Kuba bayazi ukuba ophetheyo, kwaye abafuni ukuba ukufumanisa kuba bayazi ukuba umntu kufuneka aphendule ukuba.
Abadala ngendlela efanayo. Ngokufuthi siza Kulungile ekwenzeni izinto akuhambi sifanele senze, logama nje umntu kufuneka aphendule ukuba akafuni ukufumana. Ukuba siyavuya ukuba ikhawuleze ude ubone rhataa phambili. Mhlawumbi siyavuya ukushiya umsebenzi kwangethuba nje umqeshi yethu angasifumani. Mhlawumbi abanye bethu ngokukrexeza iimvavanyo nje ngunjingalwazi bungasifumani…
Ukuxelela abantu ngoYesu Kubonakala ukuba yenye yezinto ukuba sonke ukuba sifanele senze ntoni, kodwa sonke bazive benetyala ngokungenzi ngokwaneleyo. Ndilungile? Mna ndedwa ngaloo? Nakuba nje kule veki igqithileyo, Ndandiziva enetyala kuba ulwalamano ndaqalisa ukwakha omnye ummelwane wam uye uhlobo baqalisa iwe. Mna akubanga Mandinazise ngabom ngayo ekwakheni ngaloo ubudlelwane, kwaye aqhubeke zama ukuxelela kuye ngoYesu. Yaye kubonakala ngathi ndiziva ngale ndlela badla. Umbuzo ndifuna ukubuza nto? Liliphi intliziyo zifuna ukulungiswa? Ndidinga engqondweni yam nihlaziywe. Kufuneka sikhumbule ukuba kutheni mna…